प्रकाशित : पौष १३, २०७४ | १५८ पटक हेरिएकोसमाचार
यिनी हुन् दुईवटा योनी र पाठेघर भएकी महिला, पोर्न फिल्म खेल्न १० लाख डलरको अफर
काठमाडौं । पत्याउन गारो पर्छ समाचारको शीर्षक सुन्दा । त्यसैपनि शरीरमा कुनै अङ्ग बढी हुँदा त्यसले समस्या निम्त्याउँछ । तर यी महिलाको त योनी नै दुईवटा छन् । तर उनले यसलाई समस्या भन्दा पनि चर्चामा ल्याएको छ । कुरा हेजल जोन्सको हो । उनी आफैलाई पनि १८ वर्षको उमेरसम्म आफ्नो शरीर अरु महिलाहरुभन्दा फरक रहेको थाहा थिएन । पहिलोपटक आफ्नो ब्वाइफ्रेण्डसँग सम्पर्क गर्दा उनको साथीले जोन्सको शरीर अरु युवती जस्तो नभएको बताएपछि बल्ल उनले यसबारेमा चाल पाएको बताइन । पछि जाँच गर्दा हेजलको दुईवटा योनीमात्रै नभएर दुईवटा पाठेघर रहेका छन् । यो बिरामीलाई युटेरस डिडेल्फिस भनिन्छ । चिकित्सकले उपचार गरेर...Read More
प्रकाशित : पौष १३, २०७४ | १०० पटक हेरिएकोसमाचार
एक महिनाको बीचमा ६०० माझी बेपत्ता
धेरै जनाको ज्यान लिनेगरी एक महिना अगाडि आएको चक्रवातपछि भारतमा अहिलेसम्म ६६० जनाभन्दा धेरै माझी हराइरहेका छन् ।श्रीलङ्कासँगको सिमानामा पर्ने भारतीय क्षेत्रहरूबाट उनीहरू बेपत्ता भएको भारतीय अधिकारीहरूले बुधबार बताएका छन् । गत नोभेम्बरको २९ तारिखका दिन श्रीलङ्काबाट शुरु भएको चक्रवातका कारण २५० जनाको मृत्यु भएको पुष्टी भइसकेको छ । प्रतिघण्टा १३० किलोमिटरको गतिमा आएको चक्रवातले रुख बोटविरुवा उखेल्नुका साथै विद्युत र टेलिफोनका संरचनामा क्षति पुगेपछि सेवा अवरुद्ध भएका छन् भने दशौँ हजार घर ध्वस्त भएका छन् । भारतका रक्षा मन्त्री निर्मला सीता रमणले ६६१ जना माझी अहिलेसम्म बेपत्ता भएको संसदलाई जानकारी दिनुभएको छ । तर उहाँले उनीहरूको मृत्यु भइसकेको भन्न...Read More
प्रकाशित : पौष १२, २०७४ | ९७ पटक हेरिएकोसमाचार
बेलायती राजकुमार ह्यारीले ओबामासँग अन्तर्वार्ता लिएपछि…
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदभार छोडेपछि दिइएको एक दुर्लभ अन्तर्वार्तामा बराक ओबामाले गैरजिम्मेवार ढंगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । बेलायतका नवयुवराज ह्यारीसँगको बीबीसी अन्तर्वार्तामा ओबामाले ओबामाले समाजिक सञ्जालको गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रयोग गर्नाले जटिल विषयप्रति मानिसहरुको बुझाइमा असर परिरहेको बताए। उनका विचारमा त्यसले नागरिक बहसलाई प्रभावित तुल्याउँदै समाजमा गलत हल्लाहरु फैलाइरहेको छ। ओबामाले आफूपछिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको नाम लिएनन्। तर उनले नेतृत्वमा रहेका मानिसले समाजिक सञ्जालमा सन्देशहरु प्रवाह गर्दा होसियारी अपनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “इन्टरनेटको एउटा खतरा के हो भने मानिसहरुले बुझेको वास्तविकता एकदमै फरक हुनसक्छ। उनीहरुलाई आफ्नो पुर्वाग्रह सुहाउँदो जानकारीमात्र दिने वातावरण बनाइन...Read More
प्रकाशित : पौष १२, २०७४ | १३४ पटक हेरिएकोसमाचार
असी वर्षीया “सार्प शुटर” हजुरआमा, जसको छोरी विवाह गर्दा दाइजो माग्न डराउँथे (भिडियो सहित)
भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको जोहरी गाउँमा बसोबास गर्ने उनले ६० वर्षको उमेरमा पहिलो पटक पिस्तोल समातेकी हुन्। सबैले उनलाई ‘शुटर दादी’ भनेर चिन्छन्। उनि गाउँमा यति चर्चीत कि गाउँमा सबैले उनलाई शुटर दादी भनेर चिन्छन् । यति मात्र होइन, उनको घरका छोरीहरु बिवाह गर्न आउने केटाहरुले समेत डरले बिना दाइजो बिवाह गरेका थिए । उनि मात्र शुटर होइनन् उनको निशाना देख्ने हो भने हामी सबै अचम्ममा पर्दछौं । हामीलाई नदेखे सम्म विश्वास नै लाग्दैन । उनी आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन यो खेल सिकेको बताउँछिन्। उनको अभ्यास र लगन देखेर धेरै भारतीय किशोरीहरु शुटिङ खेलप्रति आकर्षित भएका छन्। उनी आफ्नो गाउँमा एउटा...Read More
प्रकाशित : पौष १२, २०७४ | ११४ पटक हेरिएकोसमाचार
एजेन्सी । हर्कतपनि अनौठा–अनौठा प्रकृतिका हुन्छन् । आफ्नै विश्वास भित्रका मानिसको गलत हर्कतका कारण भविष्य नै डामाडोल हुने गर्दछ । भारतको राजधानी दिल्लीस्थित दिल्ली विश्वविद्यालयकी २२ वर्षीया एक छात्रा पछिलो दुई हप्तादेखि प्रहरी र प्रशासनमा धाइरहेकी छन् । उनी पोर्न साइटमा राखिएको आफ्नो तस्बिर हटाउन माग गर्दै यसरी धाइरहेकी हुन् । तर, मौजुदा कानुनले उनलाई झन झमेलामा फालेको छ । सरकारको सूचना विभागले उनको फोटो हटाउन सकेको छैन् । किनभने सर्बोच्च अदालतको गाइडलाइन अनुसार कुनैपनि साइटमा राखिएको कुनैपनि सामग्री अदालतको आदेशबिना हटाउन पाइँदैन । साइबर एक्सपर्टका अनुसार कानूनकै कारण साइबर क्राइमबाट पीडितहरुलाई झन समस्या भइरहेको छ । यसका लागि अदालतको...Read More
प्रकाशित : पौष ११, २०७४ | ८२ पटक हेरिएकोसमाचार
६ वर्षको बालक रेयानको बार्षिक आम्दानी १ अर्ब भन्दा बढी
एकजना ६ वर्षको बच्चाले कति कमाउन सक्छ ? तपाईंले सोच्न सक्नुहुन्छ यति सानो उमेरको बच्चा पनि काम गर्न सक्छ र ? तर, रेयान हरेक साता युट्यूबमा खेलौना सामाग्रीको रिभ्यू गर्छन् र यसका लागि सम्बन्धित कम्पनीले उनका आमा बुवालाई राम्रो रकम प्रदान गर्छ । रेयानले गत वर्ष ११ मिलियन डलर कमाएका थिए । नेपाली रुपैयाँमा यो रकम १ अर्ब १० करोडभन्दा बढी हो । र, यसको कारण पनि हो, युट्यूबमा रेयानको भिडियो कराडौंले हेर्छन् । ६ वर्षका वालक रेयान ट्वायजरिभ्यू नामक एक युट्यूब च्यानल चलाउँछन् । यस युट्यूब च्यानलको माध्यमबाट रेयान आफ्ना युअर्सलाई खेलौनाको दुनियाँमा लैजान्छन् । फोर्व्स म्यागाजिनले उनलाई सन्...Read More
प्रकाशित : पौष ११, २०७४ | १०२ पटक हेरिएकोसमाचार
भारतले बेलायत र फ्रान्सलाई पछि पार्दै सन् २०१८ विश्वकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने मङ्गलबार सार्वजनिक एक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भारत अहिलेसम्म विश्वको सातौँ ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भएपनि सन् २०१८ मा दुईस्थान माथि चढ्दै पाँचौँ स्थानमा पुग्न देखिएको लण्डनस्थित आर्थिक तथा व्यवसायिक अनुसन्धान केन्द्र (सेन्ट्रल फर इकोनोमिक्स एण्ड विजिनेस रिसर्च)द्वारा जारी बार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसैगरी भारतले सन् २०३२ मा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वकै तेस्रो स्थानमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निर्वाचित भएर आएपछिका तीन बर्षमा भारतीय अर्थतन्त्रले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा तीन बर्षकै निम्न आर्थिक उपलव्धि...Read More
प्रकाशित : पौष १०, २०७४ | १०५ पटक हेरिएकोसमाचार
मृत्युदण्ड सुनाइएका भारतीय अधिकारीले गरे आमा र धर्मपत्नीसँग सम्वाद
इश्लामावाद, १० पुस – पाकिस्तानमा नियन्त्रणपछि मृत्युदण्डको सजायँ सुनाइएका भारतीय नौसेनालाई सोमबार आफ्नी आमा र श्रीमतीसँग सम्वाद गर्ने मौका दिइएको छ । पाकिस्तान विरुद्ध जासूसी गरेको आरोपमा सन् २०१६ मा पक्राउ गरिएका उनलाई भारतको आग्रहमा मृत्यु दण्ड नदिई काराबासमा राखिएको छ । मानवीय भावनालाई ध्यानमा राखेर कैदीलाई उनका आमा र श्रीमतीसँग सम्वाद गर्ने मौका दिइएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरुलाई सिसाबाट देखिने र माइक्रोफोनबाट सुनिनेगरी बोल्ने र भेट्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको थियो । भेट्न र बोल्न आएका महिलाहरु भेट्नु र बोल्नु अघि र पछि निकै चिन्तित र तनावमा देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । भेट्न र बोल्न आएका ती आमाले...Read More
प्रकाशित : पौष ९, २०७४ | १३५ पटक हेरिएकोसमाचार
भारतीय मूलकी निकी, बन्लिन् त अमेरिकाको पहिलो महिला राष्ट्रपति !
एजेन्सी– जेरुसलेमलाई इजरायलको राजधानी बनाउने अमेरिकी अभियान गत बिहीबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट तुहिसकेको छ। तर, यो महासभामा राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी दूत निकी हालीले गरेको सम्बोधनलाई लिएर अमेरिकामा नयाँ बहसले जन्म लिएको छ। निकीले राष्ट्रसंघको महासभामा अमेरिकाको पराजयका बाबजुद आफ्नो देशले इजरायलको राजधानी जेरुसलेममा राख्ने अडानमा कायमै रहने घोषणा गरेकी थिइन्। उनले मतदान हुनुअघि पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै भाषामा आफ्नो देशको पक्षमा उभिन सहयोगी राष्ट्रलाई आह्वान गरेकी थिइन्। निकीले आफ्नो देशलाई सहयोग नगर्ने राष्ट्रलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएकी थिइन्। उनको भाषणलाई लिएर केहीले आलोचना पनि गरेका छन्। तर, अमेरिकी स्वार्थलाई अगाडि राखेर राष्ट्रसंघमा निर्भिकताका साथ बोलेको...Read More